🥇 accounting uye kuzivisa kwechikwereti institution
Chiyero: 4.9. Nhamba yemasangano: 236
Vhidhiyo yekuverenga uye kuburitsa yechikwereti institution
Raira accounting uye kutaurwa kwechikwereti institution
Accounting uye kutaurwa kwechikwereti institution muUSU Software zvakarongeka mune yazvino nguva modhi, saka chero mashandiro anoitwa nekiredhiti institution inoratidzirwa pakarepo mukuverenga kwayo uye panguva imwechete yakanyorwa yekumhan'ara, nepo vashandi vasingatore chikamu chero ipi yeaya maitiro, asi chete mukuitwa kwekushanda pachako uye kunyoreswa kwayo mune zvemagetsi mafomu. Zvino, zviito zvese, kusanganisira accounting uye kuzivisa, zvinoitwa neotomation: kuunganidza ruzivo rwevashandisi kuchisimbisa kutengeserana kunoitwa, kuchimisikidza nemaitiro, zvinhu, zvidzidzo, uye zviratidzo zvekuverenga zviri pasi peaccounting uye zvinosanganisirwa mukuburitsa otomatiki, uye mhedzisiro yakawanikwa inoratidzwa pakarepo mugwaro rinoenderana neiyi nzira yekuverenga.
Automation ye accounting uye kutaurisa kweye chikwereti institution inovandudza zvemukati maitiro ayo ane echikwereti institution mune ayo mashandiro, inodzora mabasa uye basa revashandi, inosimbisa kutonga pamusoro pe accounting nekuzivisa, inomhanyisa ruzivo rwekuchinjisa, uye, nekudaro, inowedzera hunyanzvi uye kurongeka kwe accounting, hunhu hwekuzivisa uye nekukurumidza mashandiro ekambani, inoderedza mitengo yechikwereti nekudzora mutengo wevashandi uye nekuwedzera kugadzirwa kwevashandi, izvo, semhedzisiro, zvinotungamira mukugadzirisa purofiti. Ichishandisa iyo otomatiki yekuverenga uye kuzivisa, chinzvimbo chechikwereti chinogadzira maitiro ese ekuchengeta marekodhi ezviitiko zvaro uye inogadzirisa ruzivo pamhando dzakasiyana dzekupupura, kusanganisira accounting kumakambani anopikisa uye kuwanda kwehuwandu hwevatongi, nepo automation ichiri kugadzira zvinyorwa zvese zvemhando ipi neipi. yekuzivisa.
Naizvozvo, kutora chikamu kwevashandi vekiredhiti institution kunodzikiswa mukugadzirisa kweayo mabasa, kusanganisira accounting nekuzivisa, nekuti chirongwa che automation chinoita mabasa mazhinji uye, nekudaro, chinoshanda panzvimbo pevashandi, vane basa iro ikozvino rinongosanganisira kuwedzera kuverenga kwavo ku mafomu emagetsi ataurwa pamusoro, ari ega evashandi vese uye anopa wega mutoro wehunhu hweruzivo rwunotumirwa mavari uye otomatiki mari yemubhadharo wemwedzi wega wega, uchifunga nezve ruzivo rwunotumirwa mavari.
Automation yenzvimbo yechikwereti inodzora zviitiko zvevashandi, tichifunga nezve nguva uye chiyero chebasa rakasungirirwa pane imwe neimwe oparesheni inoitwa, inogadziridza basa ravo, ichipa matanda ega ega uye nzvimbo yebasa yega - nzvimbo yebasa mukati mehunyanzvi uye mabasa akapiwa. Panguva imwecheteyo, iyo otomatiki yekuverenga uye kushumwa kwechikwereti institution inopa zvakabatana mafomu emagetsi semagazini emunhu ega ega kuti akurumidze maitiro ekupinda enzira anoitwa nevashandisi mazuva ese, nokudaro achiwedzera kumhanya kwemaitiro, sezvataurwa pamusoro apa. Kubatanidzwa kwemafomu anopiwa neotomation kunotungamira mukubatanidzwa kwemabasa, kuunza kwavo kuuraya kune otomatiki, iyo inodikanwa kukwidziridza zviitiko. Panguva imwecheteyo, iyo otomatiki yechikwereti institution inonyora huwandu hwebasa rinoitwa nevashandisi munguva, zvinoenderana nekumisikidzwa kwekushanda, uye inoongorora kushanda kweumwe neumwe mushure menguva mukugadzirira kwekuzivisa kwemukati pamwe nekuongororwa kwemarudzi ese yebasa nevashandi vanobatanidzwa mazviri.
Automation yenzvimbo yechikwereti inoitendera kuti igare ichiongorora zviitiko zvayo, kusanganisira kuongororwa kwenzvimbo yezvikwereti zvinoumba purofiti, saka ongororo yavo inoita kuti zvikwanise kudzora maitiro evatengi, kutevedzera kwavo mamiriro echikwereti, iyo nguva yekubhadhara, uye huwandu hwechikwereti chiripo. Izvo zvinofanirwa kuwedzerwa kuti chete USU Software inopa otomatiki ongororo mune ino chikamu chidimbu, nepo zvakafanana zvinopihwa kubva kune vamwe vanogadzira vanogona kungozvipa iwo pamutengo wakakwira wechirongwa. Chikwereti chinogamuchira kwete chete mishumo pamwe nekuongororwa kwemhando dzese dzebasa asiwo huwandu hwezviratidzo zvine simba reshanduko munguva dzakapfuura, izvo zvinobvumidza kuronga kwakaringana kwenguva dzemunguva yemberi, tichifunga nezve data rakaunganidzwa uye kufungidzira mhedzisiro, tichiwedzera kupfuura maitiro akaonekwa.
Iyo purogiramu yakaiswa pamakomputa echikwereti institution nehunyanzvi hwedu, pasina kubatanidza vashandi vayo mukumisikidza, asi ichipa mhedziso pfupi yezvose kugona kwesoftware, iyo zvakare inobvumidza vashandi kukurumidza kuzviziva ivo pachavo nehunhu hwebudiriro inosimudzira. Kunyangwe zvigadzirwa zvedu zvichisiyana kubva kune vamwe vese nekufamba kwavo kwakaringana uye yakapusa interface, izvi zvinokutendera iwe kuti ubatanidze vashandi mubasa pasina chero hunyanzvi hwekushandisa, ichipa iyo otomatiki system neruzivo rwakasiyana. Ruzivo rwakasiyana rwakadai runobatsira kunyora tsananguro yakadzama uye yakadzama yemamiriro azvino maitiro nemaitiro ari kuitwa panguva yakatarwa mubazi rezvemari.
Kugadzirisa mushandisi anoshanda, sarudzo yemakumi mashanu ematanho dhizaini dhizaini inopihwa kuburikidza neiri nyore scroll scroll pane main screen. Vashandisi vanogashira yakasarudzika yekuwana sevhisi yedata, inogumirwa nehukuru hwemabasa avo nemasimba, nekupa yavo yega magogi uye mapassword. Kupinda mukati memunhu kunopa kuita mune emagetsi mafomu, ari nyore kutonga pamusoro pehunhu, nguva yekuurayiwa, uye kuvimbika kwedata. Kudzora ibasa revatariri, iro rine mukana wekuwana mahara zvinyorwa zvese, rinoshandisa iro rekuongorora basa kuti rikurumidze maitiro ekutarisa matanda.
Kubva pane dhatabhesi akaumbwa mune otomatiki system, yevatengi base, zita remazita, chikwereti base, mushandisi base, uye zvimwe zvinounzwa zve accounting nekuzivisa zvemhando dzakasiyana dzezviitiko. Chinhu chikuru mukuverengera zvikwereti ndicho hwaro hwezvikwereti, izvo zvine kwete chete runyorwa ruzere rwavo asiwo ruzivo rwakadzama pane yega yega chikumbiro nemitemo, zviyero, uye mamiriro. Pachikwereti chega chega, unogona kuratidza rondedzero yakadzama yekushanda kunoitwa muchikwereti kubva payakapihwa, kusanganisira mazuva, zita remabasa akaitwa, uye mhedzisiro yawanikwa. Kuvhiya kwega kwega kunoitwa mudura rezvikwereti kunopihwa chinzvimbo chakapatsanurana uye ruvara kwariri kuti riongororwe pamusoro penzvimbo yechikwereti kuti ikurumidze kuyiongorora.
Iyo otomatiki sisitimu yechikwereti masisitimu anoshandisa zvakanyanya kuratidzwa kwemara kwezviratidzo, izvo zvinoponesa vashandisi nguva pakuongorora maitiro azvino uye kuzadzisa mhedzisiro. Nzvimbo yechikwereti inogona kurongedzwa zviri nyore nenzvimbo kuratidza nzvimbo chaiyo yebasa, iyo inobatsira kupatsanura mashandiro ekambani uye, nekudaro, kukurumidza kuita kwavo. Izvo zvisina kukosha zvakanyanya kupfuura hwaro hwezvikwereti ndeyevatengi base, uko kwete chete dhata remunhu nehukama hwevanokwereta hwakaunganidzwa asi nhoroondo izere yekudyidzana neimwe yega inounganidzwa. Pano, rejista yakafanana yekutaurirana nemumwe mutengi inoumbwa, uko zviito zvese zvinoitwa zvinoratidzwa nemazuva, anosanganisira mafoni, tsamba, uye mhedzisiro yekuonana.
Vatengi vakapatsanurwa muzvikamu zvinoenderana nechikamu chakasarudzwa nechikwereti, izvi zvinokutendera kuti uronge kusangana nemapoka anotarisirwa, izvo zvinowedzera zvinoshamisa chiyero chekudyidzana. Ichi chirongwa chakazvimiririra chinoita zviyero zvese zvine chekuita nekuverenga uye kuburitsa, kusanganisira kubhadhara uchifunga chirongwa chekubhadhara, chimbadzo, makomisheni, uye unoitazve kudzokororwa kwemubhadharo kana chiyero chekutsinhana zvachinja. Iyo inoverenga zvidimbu zvemubhadharo kune vashandisi zvinoenderana nehuwandu hwezviito zvakanyoreswa mumabasa avo matanda, zvichiwedzera chiitiko chevashandi.